လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
• ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ ၇၉၂၈၈၉၈၆၀၀ ၅၉ ၁၅၃ ဇူလိုင် ၂, ၂၀၂၂ USCB's world population clock
ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ ၇၉၂၈၈၉၈၆၀၀ ၅၃ ၁၃၇ ဇူလိုင် ၂, ၂၀၂၂ USCB's World population clock
ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ ၇၉၂၈၈၉၈၆၀၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၂, ၂၀၂၂ USCB's World population clock
3 စင်ကာပူ ၇၁၉.၉ ၂၇၈ ၅,၆၁၂,၃၀၀ ၇,၇၉၆ ၂၀,၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
6 ဘာရိန်း ၇၅၇ ၂၉၂ ၁,၄၅၁,၂၀၀ ၁,၉၁၇ ၄,၉၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived6February 2017 at the Wayback Machine.
7 ဗာတီကန် ၀.၄၄ ၀.၁၇ ၈၀၀ ၁,၈၁၈ ၄,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
10 Sint Marrten (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၄ ၁၃ ၃၉,၄၁၀ ၁,၁၅၉ ၃,၀၀၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
12 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၂၉၉၀၈၆၆ ၁၂၀၁ ၃၁၁၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
22 အာရူးဗာ (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၁၈၀ ၆၉ ၁၀၅,၆၆၈ ၅၈၇ ၁,၅၂၀ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈  Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
29 ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၆၃.၉၁ ၁၄၁ ၁၆၁,၅၇၃ ၄၄၄ ၁,၁၅၀ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈  Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
33 နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၆၃၂၉၉၈ ၄၂၅ ၁၁၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived9October 2018 at the Wayback Machine.
35 အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၉၇၅၉၉၆၅၆ ၄၂၅ ၁၁၀၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Population clock based on 2011 census
36 အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၅၄၉၅၈၀ ၄၃၃ ၁၁၂၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
37 ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
40 ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၂၇၆၉၈၉၂ ၃၇၆ ၉၇၄ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
41 ဂူအမ် (US) ၅၄၁ ၂၀၉ ၁၈၄,၂၀၀ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived2August 2018 at the Wayback Machine.
42 Reunion ၂,၅၀၃.၇ ၉၆၇ ၈၅၀,၉၉၆ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
44 Martinique ၁,၁၂၈ ၄၃၆ ၃၇၆,၈၄၇ ၃၃၄ ၈၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
51 အမေရိကန်ဆမိုးအား (US) ၁၉၇ ၇၆ ၅၇,၁၀၀ ၂၉၀ ၇၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived2August 2018 at the Wayback Machine.
53 စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် ၃၈၉ ၁၅၀ ၁၀၉,၅၅၇ ၂၈၂ ၇၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived9September 2016 at the Wayback Machine.
54 ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၅၂၂၁၅၀၁ ၂၆၈ ၆၉၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived2May 2019 at the Wayback Machine.
57 ဂွါဒလ်ကျွန်း ၁,၆၂၈.၄ ၆၂၉ ၃၉၅,၇၂၅ ၂၄၃ ၆၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
61 ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
63 ကေးမန်းကျွန်း ၂၅၉ ၁၀၀ ၅၅,၄၅၆ ၂၁၄ ၅၅၄ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result Archived 21 September 2013 at the Wayback Machine.
64 ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
70 အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
71 နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
72 ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) ၁၅၁ ၅၈ ၂၉,၅၃၇ ၁၉၆ ၅၀၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate Archived 25 May 2002 at the Wayback Machine.
74 စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် ၂၇၀ ၁၀၄ ၅၁,၉၇၀ ၁၉၂ ၄၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ Official estimate Archived2June 2013 at the Wayback Machine.
76 အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ၄၆၄ ၁၇၉ ၈၀,၂၀၉ ၁၇၃ ၄၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
85 Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၂၁ ၈ ၃,၁၉၃ ၁၅၂ ၃၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived2August 2018 at the Wayback Machine.
89 တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၁၇၃၇၀၇၂၅ ၁၄၇ ၃၈၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate
98 တိုဂို ၅၆,၆၀၀ ၂၁,၈၅၃ ၇,၃၅၂,၀၀၀ ၁၃၀ ၃၃၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 27 August 2018 at the Wayback Machine.
103 မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (US) ၄၅၇ ၁၇၆ ၅၃,၈၈၃ ၁၁၈ ၃၀၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
105 ထရန်နစ္စတြီးယား ၄,၁၆၃ ၁,၆၀၇ ၄၇၅,၆၆၅ ၁၁၄ ၂၉၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅  Archived3August 2017 at the Wayback Machine.
106 ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၁၂၆၄၄၈ ၁၂၅ ၃၂၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
108 ဆလိုဗက်ကီးယား ၄၉,၀၃၆ ၁၈,၉၃၃ ၅,၄၄၃,၁၂၀ ၁၁၁ ၂၈၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
113 တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
114 ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၄ ၄၂,၄၂၆ ၁၁,၂၂၁,၀၆၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 31 July 2017 at the Wayback Machine.
119 အယ်လ်ဘေးနီးယား ၂၈,၇၀၃ ၁၁,၀၈၂ ၂,၈၇၀,၃၂၄ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
122 မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၄၄၀၃၂၀၀ ၁၀၄ ၂၆၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
124 အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၃၉၆၅၂၆၅ ၁၀၄ ၂၆၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
125 ဒိုမီနီကာ ၇၃၉ ၂၈၅ ၇၁,၂၉၃ ၉၆ ၂၄၉ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
126 မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ် ၃,၃၅၅ ၁,၂၉၅ ၃၁၃,၆၂၆ ၉၃ ၂၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate Archived 8 January 2016 at the Wayback Machine.
138 မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၆၁၂၂၆၄၉ ၈၁ ၂၁၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
141 တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (UK) ၄၉၇ ၁၉၂ ၃၇,၉၁၀ ၇၆ ၁၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
145 ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
146 ဘရူနိုင်း ၅,၇၆၅ ၂,၂၂၆ ၄၂၂,၆၇၈ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 11 November 2016 at the Wayback Machine.
147 တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
149 ဆမိုးအား ၂,၈၃၁ ၁,၀၉၃ ၁၉၇,၄၄၈ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
150 ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၅၁,၂၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၃,၅၁၁,၃၇၂ ၆၉ ၁၇၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 14 November 2018 at the Wayback Machine.
151 Republic of Ireland ၇၀,၂၇၃ ၂၇,၁၃၃ ၄,7၇၉၂,၅၀၀ ၆၈ ၁၇၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 June 2018 at the Wayback Machine.
153 အဲ့စ်ဝါတီးနီ ၁၇,၃၆၄ ၆,၇၀၄ ၁,၁၄၅,၉၇၀ ၆၆ ၁၇၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 22 June 2019 at the Wayback Machine.
155 နော်ဖော (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၃၅ ၁၄ ၂,၃၀၂ ၆၆ ၁၇၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
155 ဘူဂေးရီးယား ၁၁၁,၀၀၂ ၄၂,၈၅၈ ၇,၀၅၀,၀၃၄ ၆၄ ၁၆၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 25 June 2018 at the Wayback Machine.
160 အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၉၀၄၆၆၈ ၆၅ ၁၆၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official projection
167 အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၄၇၂၈၆၃၃ ၅၁ ၁၃၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
168 မွန်ဆာရတ် (UK) ၁၀၂ ၃၉ ၄,၉၂၂ ၄၈ ၁၂၄ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
172 ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
173 အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived6July 2018 at the Wayback Machine.
176 လိုက်ဘေးရီးယား ၉၇,၀၃၆ ၃၇,၄၆၆ ၄,၂၈၉,၅၂၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
179 ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၂၀၀၆၂၈၇ ၄၆ ၁၁၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
181 ဂီနီ-ဘီစော ၃၆,၁၂၅ ၁၃,၉၄၈ ၁,၅၅၃,၈၂၂ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
184 ဂျီဘူတီ ၂၃,၀၀၀ ၈,၈၈၀ ၈၆၄,၆၁၈ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ Official estimate Archived4March 2016 at the Wayback Machine.
185 ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၈၄၈,၉၀၅ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
189 ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၈၂၈,၁၁၀ ၃၅ ၉၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
191 အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၅၆၈၄၂၂၁ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
193 လတ်ဗီယာ ၆၄,၅၆၂ ၂၄,၉၂၈ ၁,၉၂၃,၅၀၀ ၃၀ ၇၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
194 အက်စတိုးနီးယား ၄၅,၃၃၉ ၁၇,၅၀၅ ၁,၃၁၅,၆၃၅ ၂၉ ၇၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
196 လာအို ၂၃၆,၈၀၀ ၉၁,၄၂၉ ၆,၄၉၂,၄၀၀ ၂၇ ၇၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result Archived 18 March 2020 at the Wayback Machine.
199 ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၅၆၇၁၄၃၂ ၂၅ ၆၆ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
201 အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၉,၂၅၀,၀၀၉ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived4June 2016 at the Wayback Machine.
204 ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၅၃၂၄၂၈ ၂၃ ၆၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
205 ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 26 February 2021 at the Wayback Machine.
206 ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
207 ဗနွားတူနိုင်ငံ ၁၂,၁၉၀ ၄,၇၀၇ ၂၇၂,၄၅၉ ၂၂ ၅၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official mini-census result Archived 18 July 2018 at the Wayback Machine.
209 ဘူတန် ၃၈,၃၉၄ ၁၄,၈၂၄ ၈၀၂,၂၉၆ ၂၁ ၅၄ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ Official population clock Archived 19 March 2016 at the Wayback Machine.
215 နယူးဇီလန် ၂၇၀၄၆၇ ၁၀၄၄၂၈ ၅၁၉၁၆၄၂ ၁၉ ၅၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
226 အိုမန် ၃၀၉,၅၀၀ ၁၁၉,၄၉၉ ၄,၁၈၃,၈၄၁ ၁၄ ၃၆ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၅ Weekly official estimate Archived 30 May 2014 at the Wayback Machine.
233 ရုရှား ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၇၇,၀၈၈ ၉ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 15 June 2018 at the Wayback Machine.
240 ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၈၃၆၅၈၅၀ ၄ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate
241 ဘော့ဆွာနာ ၅၈၁,၇၃၀ ၂၂၄,၆၀၇ ၂,၀၂၄,၉၀၄ ၃.၅ ၉.၁ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result Archived 25 May 2013 at the Wayback Machine.
245 ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၆၄၇၅၇၂၁ ၃ ၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate
250 မွန်ဂိုးလီးယား ၁,၅၆၄,၁၀၀ ၆၀၃,၉၀၂ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၉ ၄.၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.
လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အများဆုံး နိုင်ငံများ[ပြင်ဆင်ရန်]
1 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၂၉၉၀၈၆၆ ၁၂၀၁ ၃၁၁၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
2 ထိုင်ဝမ် ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
3 တောင်ကိုရီးယား ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official projection
4 ရဝမ်ဒါ ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
5 နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၆၃၂၉၉၈ ၄၂၅ ၁၁၀၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived9October 2018 at the Wayback Machine.
6 ဟေတီ ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
7 အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၉၇၅၉၉၆၅၆ ၄၂၅ ၁၁၀၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ India Population clock Archived 24 November 2015 at the Wayback Machine.
8 အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၅၄၉၅၈၀ ၄၃၃ ၁၁၂၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
9 ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
10 ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
11 ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၂၇၆၉၈၉၂ ၃၇၆ ၉၇၄ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
12 ဂျပန် ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
13 သီရိလင်္ကာ ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
14 ဗီယက်နမ် ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
15 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၂၄၂,၉၁၀ ၉၃,၇၈၈ ၆၅,၆၄၈,၀၀၀ ၂၇၁ ၇၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16 ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၅၂၂၁၅၀၁ ၂၆၈ ၆၉၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived2May 2019 at the Wayback Machine.
17 ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
18 ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
19 မြောက်ကိုရီးယား ၁၂၂,၇၆၂ ၄၇,၃၉၉ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
20 နိုင်ဂျီးရီးယား ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
21 ဆွစ်ဇာလန် ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
22 အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
23 နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
24 မာလဝီ ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
25 ယူဂန်းဒါး ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
26 ဂွါတီမာလာ ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၅,၈၀၆,၆၇၅ ၁၄၅ ၃၇၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ Annual Official estimate
27 တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၁၇၃၇၀၇၂၅ ၁၄၇ ၃၈၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate
28 အင်ဒိုနီးရှား ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၁,၈၉၀,၉၀၀ ၁၃၈ ၃၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
29 ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
30 ထိုင်း ၁,၅၁၃,၁၂၀ ၅၈၄,၂၁၉ ၆၈,၄၁၄,၀၀၀ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
31 ပြင်သစ် ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၂၅,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
32 ဂါနာ ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
33 ပိုလန် ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
34 အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
35 အဇာဘိုင်ဂျန် ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
36 ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၁၂၆၄၄၈ ၁၂၅ ၃၂၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
37 ပေါ်တူဂီ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
38 ဩစတြီးယား ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
39 ဟန်ဂေရီ ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
40 တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
41 ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၆ ၄၂,၄၂၇ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate Archived 29 March 2017 at the Wayback Machine.
42 အီသီယိုးပီးယား ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
43 ဆီးရီးယား ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN estimate
44 ဘီနင် ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၀၀၂,၅၅၇၈ ၉၈ ၂၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
45 မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၄၄၀၃၂၀၀ ၁၀၄ ၂၆၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
46 အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၃၉၆၅၂၆၅ ၁၀၄ ၂၆၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
47 စပိန် ၅၀၃,၇၈၃ ၁၉၄,၅၁၂ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
48 အီရတ် ၄၃၄,၁၂၈ ၁၆၇,၆၁၈ ၃၈,၂၇၄,၆၁၈ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
49 ကမ္ဘောဒီးယား ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၅,၈၄၈,၄၉၅ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
50 ကင်ညာ ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51 ဂရိ ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
52 ရိုမေးနီးယား ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
53 မြန်မာ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
54 ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၁၁၂,၀၈၈ ၄၃,၂၇၇ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
55 ဆီနီဂေါ ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
56 မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၆၁၂၂၆၄၉ ၈၁ ၂၁၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
57 အိုင်ဗရီကို့စ် ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
58 ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၄,၁၀၃ ၁၇၁,၄၆၉ ၃၂,၁၂၀,၅၀၀ ၇၂ ၁၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 14 July 2017 at the Wayback Machine.
60 တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
61 ယူကရိန်း ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
62 မက္ကဆီကို ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
63 ယီမင် ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
64 တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
65 အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၉၀၄၆၆၈ ၆၅ ၁၆၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official projection
66 တန်ဇေးနီးယား ၈၈၃,၇၄၉ ၃၄၁,၂၁၇ ၅၄,၁၉၉,၁၆၃ ၆၁ ၁၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
67 ဂီနီ ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
68 ကင်မရွန်း ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ၅၀ ၁၂၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
69 အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၄၇၂၈၆၃၃ ၅၁ ၁၃၃ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
70 တောင်အာဖရိက ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
71 အာဖဂန်နစ္စတန် ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived6July 2018 at the Wayback Machine.
72 ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
73 မဒါဂတ်စကား ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
74 ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၂၀၀၆၂၈၇ ၄၆ ၁၁၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
75 ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ၃၇ ၉၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
76 ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
77 ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
78 မိုဇမ်ဘစ် ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
79 အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၅၆၈၄၂၂၁ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
80 ပီရူး ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
81 ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၅၆၇၁၄၃၂ ၂၅ ၆၆ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
82 အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived4June 2016 at the Wayback Machine.
83 ချီလီ ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
84 ဆိုမာလီယာ ၆၃၇,၆၅၇ ၂၄၆,၂၀၁ ၁၄,၇၄၃,၀၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
85 ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၅၃၂၄၂၈ ၂၃ ၆၁ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official population clock
86 ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 26 February 2021 at the Wayback Machine.
87 ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
88 တောင်ဆူဒန် ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
89 အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
90 နိုင်ဂျာ ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
91 ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
92 အာဂျင်တီးနား ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
93 ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
94 မာလီ ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
95 ချဒ် ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
96 ဘိုလီးဗီးယား ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
97 ရုရှား ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၀၉,၆၄၃ ၉ ၂၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 18 November 2017 at the Wayback Machine.
98 ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၇,၁၈၆,၀၀၀ ၆ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Monthly official estimate
99 ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၈၃၆၅၈၅၀ ၄ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate
100 ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၆၄၇၅၇၂၁ ၃ ၉ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၂၂ Official estimate